တင်ဒါအသိပေးချက် - Tungsten Carbide Pickaxe ကိုဝယ်ယူမည် RayHaber | raillynews
« တင်ဒါအသိပေးချက် - Akhisar ဘူတာရုံနှင့်အဆောက်အ ဦး
တင်ဒါကြေငြာချက် - Irmak Zonguldak လိုင်းတွင်ဟိုက်ဒရောလစ်ကင်တည်ဆောက်ခြင်း »
2784 4734 ရေတွက်ဧည့်ခံယူနစ် tamping အဖြိုက်နက် carbide ၏တူးဖော်အပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 566837
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ် - (0312) 5204361 - (0312) 3115305
အဖြိုက်နက် carbide ၏ 2784 အပိုင်းပိုင်းတူး tamping
ဖြန့်ဝေ၏ခ) Place: နိုင်ငံခြားလေလံများအတွက်: မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ရေးစင်တာမှညွှန်ကြားမှု Behicbey - တူရကီ / တူရကီနိုင်ငံခြားရေးလေလံများအတွက်: CIP အဓိကBehiçbeyထောက်ပံ့ရေးစင်တာမှညွှန်ကြားမှု - တူရကီ / တူရကီ
ဂ) Delivery နေ့စွဲ: Delivery အချိန်စာချုပ် 180 ပြက္ခဒိန်ကာလ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။
က) Place: ယ်ယူခြင်း၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory Control ကိုဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း (အခန်းအမှတ် 4052)
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 18.12.2019 - 14: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကတ်ကြေးစက်ဝယ်ယူ Tamping ပါလိမ့်မယ်
မီးရထား, အာဇာနည်သက်သေအထောက်အထား Ferhat တူးနေပါသည်!
Gebze7အတွက် multi Storey Car ကိုပန်းခြံကိုပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးတူးခဲ့သည်
တင်ဒါအသိပေးချက် - ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူမည် (Ballast စစ်ဆေးသောစက်၊ Buraj …)
တင်ဒါ၏ကြေငြာချက် - ရိုးရှင်းသောညှပ်ညှပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိပ်စက်သည့်အမြှေးပါးın
တင်ဒါကြေငြာချက် - Adana မီးရထားလမ်းစနစ်၊ မီးရထားလမ်းများကြံ့ခိုင်မှု၊ ရထားလမ်းတင်းကျပ်မှု…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: KONYA Tram LINE machine မေနူးညံ့ 25 tamping
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး tamping Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏စက်
တင်ဒါခေါ်ယူမှု - Buraj၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်စေသူ ၇၀ ကိုငှားရမ်းထားသည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - ၂။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုtheရိယာအတွင်းရှိသမားရိုးကျလိုင်းများပေါ်တွင်…
တင်ဒါ၏ကြေငြာချက် - E1 ရထားလမ်းအတွက်သင့်လျော်သောကွန်ကရစ်အိပ်စက်ဖြင့်ရိုးရှင်းသောညှပ်ညှပ်ညှပ်များ
တင်ဒါကြေငြာချက် - ခေတ်မီခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းနှင့်အဖျားın
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စနစ်ခေတ်မီဖို့အလုပ်၏ဌာနခွဲများ၏စက် Fles Dever Tamping
TCDD, tungsten carbide တူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည် Tamping ဖြစ်ပါတယ်